Umthandazo wokususa iliso elibi? ISan Luis Beltrán neSan Benito
Umthandazo wokususa iso elibi Kuyasebenza ekususeni obu bubi bubungqina bokomoya obonakaliswa emzimbeni womntu ochaphazelekayo.
Ngalo lonke ixesha el mundoKwiinkcubeko ezahlukeneyo ezikhoyo, inkolelo iyagcinwa yokuba ukujongwa komona, ukucinga kakubi okanye umnqweno ovela kumona inokuba ngunobangela wezifo zomzimba ezinje ngezifo, ukonzakala kunye nezigulo ezinokubangela ukufa.
Yaziwa ngokuba liliso elingendawo kuba kukholelwa ekubeni idluliselwa ngakumbi ngokujonga okukubi kulayishwe i-vibes emibi kunye neminqweno emibi.
Umcimbi wokomoya omsulwa onokuba nesiphelo esibulalayo ukuba ngaba amanyathelo afanelekileyo akathatyathwa, abantu abaninzi banokumbona ugqirha kwaye banokubona ukuphucuka okuthile kodwa ububi busekhona obangela ukonakala.
Kukubi okukubi okudala ukubonwa komntu, kuhlala kubonakala eluswini okanye ukudimazeka, into ebalulekileyo kukuba uyifumane ngexesha kwaye uyixabise ngezixhobo zokomoya.
1 Umthandazo wokususa iso elibi
1.1 Umthandazo wokunyanga iliso elingendawo
1.2 Umthandazo weSt. Louis Beltran ukususa iliso elingendawo
1.3 Umthandazo kuSanta Benedict wokuphelisa ububi
1.4 Ukuthandazela iliso elibi ebantwaneni
Injongo yesi sivakalisi shenxisa ngokupheleleyo ububi kunye nabo bonke ububiYinto enokubangela ukuba emzimbeni womntu lowo ihlupheke.
Kuyacetyiswa ukuba uthandaze nomntu ochaphazelekayo ukuba bahlala bebancinci abantwana kodwa abantu abadala abaphumi engozini.
Kuxhomekeka kubunzulu becala ngalinye kuyacetyiswa ukuba kwenziwe izivakalisi ezininzi njengengqondo, oku ukuze uthathe ingcambu engendawo kukushiya ulandelelana emntwini kodwa unokubuyiselwa ngokupheleleyo kuyo yonke into.
Lo mbandela kufuneka uthethwe ngokucacileyo nokuba yinto ethile abantu abaninzi abangakholelwa ukuba ikho.
Kukho iimeko zokwenyani zabantu abathi ndisindisiwe ekufeni okuzayo okubangelwa bububi emva kokwenza umthandazo.
Umthandazo wokunyanga iliso elingendawo
Ndiyakuwela egameni loYise… (Khankanya igama lomntu) loNyana… (Chaza igama kwakhona) nangoMoya oyiNgcwele… (Khankanya igama kwakhona) Amen.
Yesu! Indalo kaThixo
Ndiyinqumle into oyoyikayo, andiyichebi ngommese, okanye ngentsimbi, okanye ngesando, kuba ayinakuchetywa.
Ndiyinqamle egameni loYise, lo Nyana noMoya oyiNgcwele.
Ngaba uyawuthanda umthandazo wokunyanga kunye nokususa iliso elingendawo?
Mininzi imithandazo enokwenziwa ukuphilisa iliso elingendawo, nangona kunjalo kukho abo bathi ezinye zisebenza ngakumbi kunezinye kodwa Kuxhomekeka kwimeko nganye.
Masikhumbule ukuba le nto yinto ecacileyo ngokomoya, kungenxa yesi sizathu sokuba ngaphambi kokuba uthandaze, kubalulekile ukuba icace malunga nento ekufuneka yenziwe ukuze ufumane iziphumo ezifunwayo.
Njengomthombo wemimangaliso yamandla, umthandazo usinika, kule meko, ukuphiliswa okugqibeleleyo ukuba kwiimeko ezininzi kunokubonakala ngokukhawuleza, oko kukuthi, akufuneki ulinde ixesha elide ukuze uqale ubone utshintsho olunamandla emntwini .
Umthandazo weSt. Louis Beltran ukususa iliso elingendawo
Indalo kaThixo, ndiyanibonisa kwaye ndinisikelele egameni loBathathu Emnye Ongcwele, + uNyana + noMoya oyiNgcwele + abantu abathathu kunye nenqobo eyinyani kunye neNtombikazi enguMariya uMama wethu ozelwe engenasiphako isono sokuqala.
Intombi enyulu ngaphambi kokuzalwa komntwana + ngokuzala umntwana + nasemva kokubeleka umntwana + nangengcwele ezukileyo yeGertrude umfazi wakho othandekayo nozipho, Iintombi ezilishumi elinanye lamakhosazana, Lord San José, San Roque kunye neSan Sebastian kunye nabo bonke abaNgcwele kunye nabaNgcwele beNkundla yakho yasezulwini .
Ngolwazelelo lwakho luzuko + Olona luzuko luzeleyo + Ulangazelelo oluKhulu + loVuko + Olugqibeleleyo: ngenxa yeemfihlakalo eziphakamileyo kakhulu nezingcwele endizikholelwayo nangenyaniso, ndiyabucenga Ubukhosi bakho obuBalaseleyo, ndibeka uMama wakho osikelelekileyo njengoMthetheleli, igqwetha lethu lamahhala, ii-sanings zalo Isidalwa sesi sifo, iliso elingendawo, iintlungu, ingozi nomkhuhlane kunye nawuphi na umonakalo, ukwenzakala okanye ukugula.
Umthandazo oya San Luis Beltran Kwiliso elibi linamandla amakhulu!
Ingcwele esinceda ukuba sizikhulule kwizithuko abanye abantu abaphethwe ngamandla amabi abanokusiphosa kuthi.
USan Luis Beltrán yingcali ngesihloko sokuphilisa, kwezo zinemvelaphi yokomoya.
Abanye abantu bacebisa ukuba bahambe kunye nemithandazo yabo kunye nezityalo ezithile zonyango ezinceda inkqubo yenkululeko kodwa oku akunyanzelekanga kuba umthandazo wodwa ungummangaliso kwaye unamandla.
Umthandazo kuSanta Benedict wokuphelisa ububi
Owu Benedict oNgcwele! Zintanda kwaye zihlala zikhunjulwa, Ngubani ngaphambili kwemikhosi eyaziyo indlela yokukhupha, obathanda abantu bakhe, kwaye azinikele ngokupheleleyo kwiNkosi yethu.
Ndiyanicenga ukuba ngokudibana kwenu nobuThixo, Ukulungisa iimfuno zam, ngokukhawuleza okukhulu, Ukuphelisa amandla obubi, Ebomini bam nakwizalamane zam, Ngamana amandla onawo, Yiba nokulunga nothando, Yibani wususe umphefumlo wam ngenkani nangobubi.
Ngomfaneleko weNkosi yethu uYesu Krestu, ndiyakucela ukuba undipheleke ngalo lonke ixesha lobomi bam, ndiyakuncenga ukuba undikhusele kuko konke ububi nengozi, kubugqi nakubungendawo, ukuba abanazo izandla abanokundibamba ukuba abanazo iinyawo. Ngamana ungandilandela, lonke utshaba lube nalo kwaye lunkwantye, ngokukhuseleka kwakho kunye nokukaThixo.
Intlantsi okanye ukungcangcazela, ndandisoyika kwaye ndakwazi ukundenzela iyelenqe, Ngamana imilebe yam nolwimi lwam, Kuphela yiba neewaka ezenzelwe wena, Indumiso neentsikelelo, Uxolo noxolo emphefumlweni wam, Oko kungabi lusizi okanye ubuze, Nokuba Indlala okanye usizi, Ziphumla ngaphakathi kum nobomi bam, Kwaye nangona zidlula, ndinamandla okubonga igama lakho elingcwele.
Ndizinikezela kuwe, ndiyathemba kwaye ndiyathemba kuwe, Amen.
Reza Umthandazo weSt. Benedict wokuphelisa ububi kunye nokholo.
U-Saint Benedict owaziwa ngokuba ngumkhonzi amkholisiweyo nguThixo yiyo loo nto eba ngumncedisi wethu kwiimeko apho kufuneka khona susa ububi ebomini bethu, ekhaya, msebenzi, ekhaya y familia.
Icawa yamaKatolika kwihlabathi liphela igxininisa ekusetyenzisweni kwe Imbasa ye-Saint Benedict ukusigcina sikude okanye sikhuselekile kwi-ml efumaneka kuyo yonke indawo.
Amandla amabi afumaneka kuyo yonke indalo ekhoyo, yiyo loo nto kubalulekile ukuba ukhuselwe, ukwenza umthandazo eSt Benedict mihla le kusinceda ukuba sizigcine sicocekile kula mandla mibi nakubo bonke ububi obunokusifikela.
Ukuthandazela iliso elibi ebantwaneni
Ngegama elingcwele likaThixo utata;
Kwigama elingcwele labawileyo kunye nabakhuseli basezulwini abahlala ezulwini, abagcina ukuthanda kwabo bathembekileyo.
Owu bawo! Namhlanje ndiyakhala phambi kwegama lakho ukuze uncede lo umncinci.lezi yure zingenwe ngumona walowo ufuna ububi bommelwane wakhe.
Eyona nto ingcwele kunye nenceba yakho inokwenza konke, Nkosi, kwaye ndiyazi ukuba uyakwenza impilo yakho ibuyele kwimeko yengqondo, ulonwabo kunye nozuko lwangoku.
Mncede, Thixo Somandla, kuba nguwe kuphela onokuthi. Amen.
Abantwana babonakala njengabona bantu banobungozi kakhulu abahlupheka ngamehlo amabi, oku kwenzeka rhoqo kuba iintsana zivuka, ezintliziyweni zigcwele ububi babanye abantu, loo minqweno inomona yokuba nenye into onayo.
Izimvo ezibonakala zingenabungozi kwiliso lobuze zinokuza zithwele umthwalo omkhulu kangangokuba zide zichaphazele ingqibelelo yabantwana.
Eyona nto icetyiswayo yenza umthandazo ntsasa nganye malunga nokubakhusela abantwana kwaye uzigcine unjalo ngexesha lasemini, le iyakuba sisiko losapho.
IiMedali kunye nee-ambulethi zinokunxitywa kodwa akukho nto inamandla ngaphezu komthandazo.
Into ebalulekileyo kukuba nokholo ngexesha lomthandazo ukuze ususe iliso elibi. Akukho okunye.
Thandaza rhoqo ukuze ukholelwe ukuba yonke into ihamba kakuhle.